Xiisadda iibintii laga laabtay ee tiyaatarka oo weli taagan - Maxaa maanta soo kordhay? - Caasimada Online
Home Warar Xiisadda iibintii laga laabtay ee tiyaatarka oo weli taagan – Maxaa maanta...
Xiisadda iibintii laga laabtay ee tiyaatarka oo weli taagan – Maxaa maanta soo kordhay?
Muqdisho (Caasimada Online) – Golaha abwaanada Soomaaliyeed oo ka hadlyey go’aankii uu ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ku hakiyey kireynta dhismaha qeyb ka mid ah Tiyaartarka Qaranka ayaa soo dhoweeyey tallaabada uu qaaday Rooble, una mahadceliyey.
Xog ay heshay Caasimada Online ayaa sheegaysa in dhulkaan oo ka tirsan dhismaha Tiyaatarka islamarkaana ah meel banaan oo ka kooban dhowr boos lagu wareejiyay Shirkadda Xaawo Taako, oo ay leeyihiin ganacsato, oo laga iibiyey balse lagu daboolay kireyn 250 dollar ah bishii.
Maareeye ku xigeenka Tiyaatarka abwaan Cabdikariin Faarax Qaarey (Jiir) oo ka hadlay madasha ayaa mahad-celin kadib sheegay in weli ay shaki ka qabaan hadalkii wasiirka warfaafinta ee ahaa in illaa amar dambe la joojiyey kireynta xarunta Tiyaatarka.
Jiir ayaa ka digay in la siyaasadeeyo arrintan, wuxuuna shaaciyey amar sidiisaba uu yahay fulin, loona baahan yahay in ganacsatada ay ka baxdo dhismaha Tiyaatarka Qaranka.